Windows AeroSnap mmetụta ma ọ bụ Compi Grid na Xfce | Site na Linux
Na nso nso a onye ọrụ jụrụ m site mail ma ọ bụrụ na na Xfce anyị nwere ike ịnwe ihe yiri mmetụta ahụ Aerosnap de Windows, ma ọ bụ Compiz Grid, nke anyị ji edozi windo n'etiti ihuenyo site na ịdọrọ ya na nsọtụ ihuenyo ahụ.
Ọ na-enyo na na Archlinux AUR enwere kwachie maka Ekem nke ahụ na-enye anyị ohere ịme nke a (ọ na - arụ ọrụ site na p% $ # nne) nke anyị nwere ike iwunye site mmeghe a console na-etinye:
Na njedebe, mgbe ọ gwụchara ihe niile, ọ ga-agwa anyị nke ahụ xwfm4-tiling esemokwu na xfwm, ma nke ahụ enweghị mmasị na anyị. Anyị na-agwa gị na ọ bụrụ na ị wụnye ma mgbe ịpụ ma banye ọzọ, anyị ga-enweta nsonaazụ na-esonụ:
Otu ihe ma ọ bụrụ na anyị ịdọrọ n'aka nri, dị ka n'aka ekpe na iberibe nnukwu (M na-eche ihe atụ, obi dị m ụtọ), ọ na-emekwa ya elu na ala 😀
Dezie: Ọ bụrụ na mmetụta enweghị aha ahụ, na Windows ma ọ bụ Compiz ka m mara ... 😛
M hụrụ Xfce <3 n'anya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Windows AeroSnap ma ọ bụ Compi Grid na Xfce
Dị ka ị na-ekwu, m na-atụkwa anya na nke a na ndabara na 4.10, arụnyere m ya n'ihi na m nwere mmasị na atụmatụ ahụ nke windo m wee chọọ ya ruo mgbe m chọtara ya maka xfce, ọ bụrụ na ị were windo elu ma ọ bụ ala ọ na-eme otu ihe ahụ ma na-egosi na ọ dị mma. Ihe ọ ga - enweghị (n'echiche m) bụ na site na ịdọrọ windo gaa n'akụkụ ya, etinye ya na ntanetị 2 × 2, n'ihi na ihe a ga - ahụ ugbu a bụ 2 × 1 ma ọ bụ 1 × 2 (dabere na ọ dị n'akụkụ ma ọ bụ vetikal), ma ọ bụ mee ya na hotkey.
Ka o sina dị, ọ dị ezigbo mma ma ana m akwado ya maka ndị ọrụ xfce na-eji ihe karịrị otu windo na desktọọpụ ma ọ bụ nwee nnukwu na / ma ọ bụ nnukwu monitors haha.
Na maka gnome? okporo na otu esi eji ya 😐
Mmm enweghị echiche. Echere m na ị ga-eji Compiz maka nke ahụ.
Naanị ị ga-etinye CompizConfig na ngalaba "Window Manager", lelee Grid igbe ma nyefee nchịkọta isi ịchọrọ.
Ọ bụrụ na ndị ọchịchị ekwe ya ahapụ m njikọ a ka a blog isiokwu ebe ha na-aká »wa ya nzá» site nzọụkwụ.
Akwa !!! Daalụ nke ukwuu Elav, ugbu a ọ nweghị ihe na-efu na Xfce m.
M ka na-enwe obi ụtọ. Edeela mrịrị na ndepụta Xfce iji hụ ma ha gụnyere arụmọrụ a na ndabara na Xfce 4.10 😀
Ọ dị ka onye na-edobe ngwugwu na AUR enweghịzi ohere ịme ya
Ihe ihere Ọ bụ ezie na nke ahụ adịghị mkpa. Itinye ihe mmachi kwesịrị ịdị mfe 😀
Ọmarịcha! damn enweghị m Arch ma ọ bụghị na LMDE = S ... ọ dị ka m ga-agbanwe mgbe m nwere ike ...
Zaghachi ka antolieztsu
Ọ bụrụ na ndị mmepe Xfce nụrụ ekpere m ma ha tinye ya maka nsụgharị na-esote, ị ga-echere ntakịrị ka ị nwee ya na LMDE 😀
Enwere m olileanya na ha ga-ege gị ntị.
Dị a dị mma nke ukwuu bara uru, mana m achọsịrị ịgbanwe Arch for Opensuse na enweghị m obi ụtọ 🙁
Ha! Gịnịkwa kpatara ya?
Amaghị m mmadụ, n'oge na-adịbeghị anya enwere m ọchịchọ ahụ ịga na-anwale ihe niile m na-eche maka itinye oge maka chakra, a gaghị ebudata ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị na m ga-alaghachi Arch.
Kedu isiokwu ị na-eji maka desktọọpụ?
Ngwakọta nke Bluebird + Zukitwo nke m mere a na-akpọ ZukiBird 😀
Ọfọn, ọ gaghị adị njọ ma ọ bụrụ na ịkekọrịta ya, n'ihi na ahụbeghị m nke ka mma maka xfce. Site n'ụzọ, ị na-eji isi mmalite nke ubuntu ka m chere?
Yep, m na-eji font Ubuntu .. Ebe ọ bụ na ụdị izizi pụtara. 😀
You nwere post banyere isiokwu gị? Ahụkwara m na ọ dị ezigbo mma!
Ọ bụrụ na ị pụtara isiokwu XFCE, ị nwere ike ịchọ n'ofe ebe a.
Hehe .. mgbe m na-adọkpụ windo n'otu akụkụ nke ihuenyo ahụ, m na-emekarị ya iji bugharịa ya na desktọọpụ ọzọ; nke a ka ga-arụrụ m ọrụ mgbe m tinyere snap ahụ?
Zaghachi Eddy Ernesto del Valle Pino
A na-atụle ihe ahụ na ndepụta Xfce. Onye nrụpụta gwara m otu ihe ahụ, na mgbe ị na-eji ihe karịrị otu nyochaa nke a nwere ike ịbụ nsogbu. M tụrụ aro ka agbakwunye ya dị ka nhọrọ, ka arụ ọrụ ma ọ bụ kwụsị dị ka onye ọrụ chọrọ ya. Onye ọzọ tụrụ aro na enwere ike ịme ya na oge na milliseconds, ya bụ, mgbe mpio ahụ rutere nso, a naghị arụ ọrụ a ruo mgbe oge gafere .. Ma ọ dịghị ihe, a na-atụle ihe niile ugbu a.
Enwere m ya na m nwere ike inyefe windo na desktọọpụ ndị ọzọ, naanị m ga-adọkpụrụ ya karịa n'akụkụ ebe desktọọpụ ọzọ dị, amaghị m etu ọ ga-esi kpaa agwa nyefere ya ndị nlele ndị ọzọ.
Okwu banyere "tiling" amalitelarị ogologo oge gara aga na arịrịọ nke ụfọdụ ndị ọrụ. N'ezie, na Xfce wiki ọ dị ka atụmatụ iji gbakwunye maka 4.10. Otú ọ dị, ndị mmepe ahụ enwebeghị ike izute ụbọchị a kara aka, ya mere, ọ ga-ekwe omume na ha hapụrụ ya maka 4.12. Anyị ga-achọpụta (belụsọ ma ọ bụrụ na enwere oge igbu oge) na Machị nke afọ a.
Ee ee, okwu a na-agagharị na ndepụta ndị mmepe. Ka anyị hụ ka o si gwụ. Oge ụfọdụ ana m enwe mmetụta na ndị mmemme Xfce anaghị achọ ịgbanwe ọtụtụ ma ọ bụ nabata mgbanwe ọhụrụ. Maka ha, ihe niile dị ka enweghị isi.
Gbanwee ihe ekwuru iji gbanwee, ihe ọ bụla anaghị amasị ha. Dịka ọmụmaatụ, na eri na ndepụta nzipu ozi ndị ozi, enwere ike ịgbakwunye tab na Thunar ma azịza ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke Janis Pohlman na ụlọ ọrụ na-ezighi ezi, na-ebo ebubo nsogbu na mmezi ya.
Eziokwu bụ na oge ụfọdụ amaghị m ihe m ga - eche maka ndị mmepe ... ugbu a ọ bụ eziokwu na ha na - agbanwe ụlọ dị n’ime Xfce ọtụtụ (xfconf, libxfceui4 dochie libxfcegui4, GIO, wdg) na-achọ ịdabere dịka obere ka o kwere omume na ụlọ akwụkwọ Gnome na GTK naanị. N'ezie na 4.8 arụ ọrụ arụla ọrụ "ọkara" ma ha na-anwa ịmechaa ya na 4.10.
Ma dịka ha onwe ha na-ekwu, enwere ndị mmepe ole na ole na-elekọta gburugburu ebe obibi, ndị dị mkpa ahapụla, agbakwunyere ole na ole na ndị ọzọ dị ka Pohlman a kpọtụrụ aha enwetala ọrụ na ụwa "ezigbo" nke na-egbochi oge ha nwere ike ịrara.
N'agbanyeghị nke ahụ, omume ya yikwara ka enweghị m ike ịgbanwe agbanwe.
Ọ bụ eziokwu, esonyeere m na mkparịta ụka ahụ. Ha na-ekwusi ike ịghara idegharị Thunar, ma ọ bụ tinye ya taabụ n'okpuru ngọpụ na ọ ga-efunahụ ịdị mfe ya. Eleghị anya ihe kpatara na ha nwere ndị mmepe pere mpe bụ nke ahụ, na ha anaghị ekwe ka m tinye ihe ọhụrụ.
Ihe na-atọ ọchị bụ Oliver Fourdan, onye okike nke Xfce anaghị esonye na ihe a. Ọ dị ka Janis Pohlman bụ onye ndu, onye na-eme mkpebi banyere ihe ị ga-eyi na ihe ị gaghị eyi ... Kedu ka ọ dị egwu ọ bụghị?
PS: Ọ bụghị ịghọgbu gị mana blọọgụ gị bụ otu n’ime mmadụ ole na ole na-atọ ụtọ na ụwa Linux. Ekele (nke m na-echefukarị ịkọ) site na mpaghara Iberia.
Daalụ maka okwu gị, ị na-agwa anyị eziokwu.M na-atụ anya na ọ ga-adị gị mma ebe a, dịka ezinụlọ.
Ekele si ebe dị n'ụwa nke atọ hahaha ..